Galvalume Steel, Hot asongwe Steel, Stainless Round Pipe - HUIYUAN
Umenzi, Suppliers of Stainless Squa ...
Umenzi, Suppliers of Stainless Roun ...
Imodeli ebandayo eshushu eqengqelekileyo 301 309s 410s 9mm 2507 30 ...
Factory Direct Ukuthengisa yangaphandle Building Aluminu ...
HONGKONG HUIYUAN urhwebo lwamanye amazwe Co., Limited.
I-HONGKONG HUIYUAN urhwebo lwamanye amazwe i-Co., Limited yenye yezona zinto zinkulu zenziwe ngentsimbi kunye ne-aluminium kunye nelithumela kwelinye ilizwe e-china. Ifunyanwa kwiphondo Shandong of China, kufutshane Qingdao Port kunye Tianjin Port, ukulayishwa imithwalo ekhawulezileyo kunye nokonga impahla kwempahla.
Ivenkile yokumisa enye yeemveliso zentsimbi, iiprofayili zealuminium kunye nezinto ezilukhuni, ziyahlangabezana nazo zonke iimfuno zakho.
I-Indepent Logistic eMoyeni, uloliwe kunye nolwandle, inikezela ngenkonzo efanelekileyo ngomgangatho olungileyo.
Esona sinyithi sikhulu kunye nomenzi wealuminium kunye nelithumela kwelinye ilizwe e-china. Ifunyanwa kwiphondo Shandong of China, kufutshane Qingdao Port kunye Tianjin Port, ukulayishwa imithwalo ekhawulezileyo kunye nokonga impahla kwempahla.
Kwiintsuku ezilishumi zokuqala zika-Agasti, isitshixo ...
Ngokwedatha evela kuMbutho we-China Iron and Steel Association, ekuqaleni kuka-Agasti ka-2021, amashishini abalulekileyo e-iron kunye nentsimbi avelise iitoni ezingama-20,439,400 zentsimbi ekrwada, i-18.326 yezigidi zeetoni zentsimbi yehagu, kunye ne-19.1582 yeetoni zentsimbi. Phakathi kwazo, imveliso yentsimbi ekrwada yayingu-2.0439 ...
Izicwangciso zikaHenan 8855 emva kwentlekele ...
Nge-13 ka-Agasti, i-Ofisi yoLwazi kaRhulumente wePhondo lase-Henan ibambe inkomfa yesihlanu noonondaba kuthotho “lwePhondo laseHenan likhawulezisa ukwakhiwa kwakhona emva kweentlekele”. Kwaxelwa entlanganisweni ukuba nge-12 ka-Agasti, i-7,283 yeeprojekthi ezonakalisiweyo kwiindawo ezichaphazelekayo zibaliwe ...
Ukuthintelwa kwemveliso akukakhululekanga, ...
Ngokubhekisele kwizixhobo zokwakha, eMantla mpuma, e-China naseMntla Ntshona e-China kubonwe ukuncitshiswa okuncinci ngenxa yezixhobo ezihlaziyiweyo kule veki, kwaye eminye imimandla inyuse imveliso ukuya kumaqondo ahlukeneyo. Umntla we-China kunye noMazantsi-ntshona e-China enze ngokungaphaya. Phakathi kwabo, iNyakatho yeChina ibangelwa ...
IPpgi Ppgl, Isinyithi seAluminiyam-Zinc, Iphepha leAluminiyam, Hot-kwalenza Steel, Ukwakha iProfayili yeAluminiyam, Aluminium ngefoyile ye coil,